ကိုလန်ဘို Careers - Tata Consultancy Services ဂျော့ဘ်နှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှုအကူအညီ
ရောဘတ်တစ်ဝက်အကောင်းဆုံး Staffing နှင့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးကုမ္ပဏီ
သြဂုတ်လ 15, 2018
သြဂုတ်လ 19, 2018
ကိုလန်ဘို Careers ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်န်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ၌ဤအလံကုမ္ပဏီအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေနိုင်ငံတကာကိုရှာဖွေနေလျှင် ဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေတစ် ဦး Tata အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီကောင်းစွာနိုင်ငံတကာလူသိများသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးအကြီးတန်းအမှုဆောင်အဖြစ်ပညာတတ်လူတွေအများကြီးရှိသေး၏။ နှင့်သင်တန်း၏, ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ်မှတ်နှိပ်။
အသစ်သောစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်ကတည်းက ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား။ နှင့် လူတွေပြောင်းရွှေ့နိုင်ကြသည် အရင်ကထက်ပိုမြန်။ အဆိုပါကိုလန်ဘိုဂျော့ဘ်လမ်းတစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေကြသည်။ အဆိုပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ တစ်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှာဖွေသူများအခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းနေကြသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် Tata အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ.
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမျှော်လင့်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ သေးငယ်တဲ့သောကြောင့် အချက်အလက်များကိုကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်နေရာမှယူနိုင်ခဲ့သည်။ နှင့်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ ကျိန်းသေနိုင် စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်။ အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သငျသညျကိုလန်ဘိုဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ် ကူညီခြင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ သူတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ငှားရမ်းနေကြလို့ပဲ။ ကာ Idia ရဲ့အောင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်ကြီးထွားလာ။ ထိုအတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အသစ်တခုပုံပြင်စီး ကမ္ဘာအနှံ့.
အိုကေ, ယခုနည်းနည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဖြေအလားအလာလူတစ်ဦး, တကမ္ဘာလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ။ အတော်လေးကျယ်ပြန့်ရှိခြင်း အလုပ်ကဏ္ဍများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူ။ ကိုလန်ဘိုကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပြသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း & ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများ
စားသုံးသူကုန်စည် & ဖြန့်ဖြူး
ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ & နည်းပညာ
စွမ်းအင်, အရင်းအမြစ် & အသုံးအဆောင်များ
အသက် သိပ္ပံ & ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ခရီးသွား, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး & Hospitality
Tata Consultancy Services အလုပ်အကိုင်
ယခု ငါတို့သည်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်နေရာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအရွယ်အစား 10000 + န်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ 1968 အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများ၏အမျိုးအစား (TCSN) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကြီးထွားလာသည်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အဖြစ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စက်မှုကွန်ပျူတာအတွင်းစကားပြော။ ဒီအခိုငျမာသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပဲထိပ်တန်း 10 ကုမ္ပဏီများမှ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အခွန် $ 10 + ဘီလျံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ၏စေသည်။ Wich တစ်နှစ်လျှင်ထိပ်တန်းဝင်ငွေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံတကာပြိုင်ဖက်ကြားတွင်။ ဥပမာအားဖြင့်, Accenture, IBM, Infosys နှင့်ပင် Apple က။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဟိုတယ်များ၏ကြီးမားသောသံကြိုးဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Tata Consultancy Services.
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကကြီးထွားရန်၎င်း၏ client များကူညီပေးနေသည်။ အဖြစ်အသစ်သောစီမံခန့်ခွဲ လမ်းတစ်လျှောက်စိတ်ဝင်စားဖို့စီမံကိန်းများ။ သေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီတစ်ဦးဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည် အိုင်တီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူ။ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုမှာနှင့်ပြင်ပ န်ဆောင်မှုနေရာလွတ်။ အတိအကျ, ကုမ္ပဏီအလုပ်အမှုဆောင်မန်နေဂျာကကမ်းလှမ်း။ Tata Consultancy Services ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရာပူဇော်သက္ကာကို။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်စစ်ဆင်ရေးနေရာလွတ်ဘို့ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များ posted နေကြတယ် ထက်ပိုမို 40 နိုင်ငံများရှိ။ ထိုအ5တိုက်ကြီးထက်ပိုပါတယ်။ ဒီတော့ကိုလန်ဘိုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသေချာများအတွက် ကုမ္ပဏီကြီးမားထက်ပို !.
ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကိုလန်ဘိုကုမ္ပဏီ, ဟာယပူဇော်သက္ကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ကိုန်ဆောင်မှုများ။ ထိုအပ်နှံမှုအဖြစ်ဒေတာစင်တာကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစစ်ဆင်ရေးအပါအဝင်သေချာဘို့ပါပဲ။ ထိုမှတပါး, ဒါရိုက်တာပျဉ်ပြားမှာအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေစိုက်စခန်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်တီနှင့်မဟာဗျူဟာအတိုင်ပင်ခံရှိခြင်း။ ဘယ်ဟာရှေ့ပြိုင်ဘက်၏ကြီးမားသောခြေလှမ်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လည်းပဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များ။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးထုတ်ကုန်အသစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာကရှေ့ဆက်ရွှေ့မည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စနစ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာနှင့်စျေးကွက်အဖွဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီအတွက်တဦးတည်းအမှတ်မှာအလုပ်လုပ်စတင်သည်။ မြေတပြင်လုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုဖြတ်ပြီးလာနှင့်ကိုလန်ဘိုနှင့်အတူကုမ္ပဏီသစ်မြင့်တက်။
ဒီကုမ္ပဏီက၎င်း၏အထူးကြောင့်, အသစ်သောစီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းခြင်းအသစ်ကစတင်ဖွင့်ကူညီပေးခြင်း။ အဖြစ်ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် software ကိုစိတ်ကြိုက်။ ထိုအခါ အိန္ဒိယအတွက်၎င်း၏ဖောက်သည်အများဆုံး နှင့်အမေရိကန်ကဒီကြီးမားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ယုံကြည်ကိုးစား။ အသစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများမြင့်တက်နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေတစ်လမ်းဖြစ်၏ကတည်းက သွားကြဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏အကွာအဝေးကိုမျှော်လင့်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုသိရအဖြစ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအနေဖြင့်ဥပမာအများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်း။ ဘဏ္ဍာရေးအထိ အိန္ဒိယနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကို။ ထို့အပြင်တယ်လီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုံးခွဲများမှရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ မြောက်အမေရိက, လက်တင်အမေရိကနှင့်ဥရောပ၌တည်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီကိုလန်ဘိုပေါ် အလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအများအပြားမန်နေဂျာကြောင်းမြင်နိုင်သည်။ ကိုလန်ဘိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိအလွန်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအထည်ကုမ္ပဏီများအဖြစ်သေးငယ်အဖွဲ့အစည်းအပေးစေလိုပါတယ်။ သို့တိုင် TSC ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြီးထွားလာ။ Tata Group ၏အခြားတစ်ဖက်, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သောတှငျ။ extensionally ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်သောကြီးမားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် နီးပါးဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုအဘို့အခွင့်အလမ်း.
၏သင်တန်း, အကောင်းဆုံးကိုလန်ဘို Careers က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, Tata Consultancy Services (ကိုလန်ဘို) ။ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကလူဌားရမ်း။ ထိုအလုနီးပါးကမ္ဘာအနှံ့မည်သည့်နိုင်ငံတွင်။ ရိုးရှင်းစွာအသူတို့တွေနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, နှင့်မတူဘဲ, အိန္ဒိယအတွက်ဦးဆောင်အိုင်တီကုမ္ပဏီများတဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ဒါကြောင့်, အလုပ်အကိုင်အလက်ခံရရှိအိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအကူအညီရှာဖွေနေ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအများအပြားရထိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယတွင်ဥပမာအားဖြင့်, ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုလန်ဘို Careers နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီနောက်ခံစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းကိုချွတ်။ အဆိုပါကိုလန်ဘို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုငှားရမ်းဖို့အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကိုမောင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အမှုဆောင်အရာရှိမတူညီသောအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အလုပ်အကိုင်တွေအများကြီး B.Tech ကုမ္ပဏီများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။ အဖြစ် MCA ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအသစ်များကိုန်ထမ်းများအတွက်အတော်လေးကောင်းတစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့ရဲ့ကရေရှည်မှာသစ်ကိုအလားအလာလူတစ်ဦး, ရင်ဆိုင်ရပါစေ, အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူ။ ကျိန်းသေကောင်းသောသင်တန်းများနှင့်ပညာရေးရှိရမည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအချက်တွေကိုပေးသော, အလုပ်ရှာအံ့သောငှါ ကိုလန်ဘို Careers အပိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ပါ။
သငျသညျနေရာလွတ်မဆိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ်ကိုလန်ဘိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်းကိုရှာဖွေနေ။ ထိုအခါကျိန်းသေသင်သည်သင်၏ကောလိပ်နှင့်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများသောကြောင့် ကိုလန်ဘိုမန်နေဂျာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ ထိုအစိတျထဲတှငျ, ကုမ္ပဏီများအိန္ဒိယတွင်သို့မဟုတ်ပွငျ၏ဤအတူ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ကောလိပ်အတွက် On-ကျောင်းဝင်းနေရာချထားပို့ချ။ ဒါဟာထို့နောက်ကိုလန်ဘိုအလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမသုံးတတ်လျှင်။ နှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ Off-ကျောင်းဝင်းစုဆောင်းမှုအောင်ကြိုးစားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြောင်းအလုပ်အကိုင်ရရန်သင့်အားမောင်းနှင်စေခြင်းငှါ။ ထိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါလိမ့်မယ် အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်သင်တို့အဘို့။
အရေးအပါဆုံးအဖြေ B.tech သို့မဟုတ် MCA ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် တစ်အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့.
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ကိုလန်ဘိုပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံး 60% အမှတ်တစ်နိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ထား။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်တစ် 60% pass တအမှတ်အသား 10th, 12th, ဒီပလိုမာ / ဘွဲ့, Post-ကျောင်းဆင်းပွဲပညာရေးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။
နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားပေးပြီးမှမီအများအပြားစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ပြင်ဆင်မှုအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်.
အသစ်ကလူတစ်ဦးအလိုတော်ကတည်းက တက္ကသိုလ်မှလျှောက်ထားခြင်းစတင်ရန်။ နိမ့်ဆုံးကိုပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက် 60% အမှတ်အနည်းဆုံးဂိုးသွင်းသငျ့သညျ။
ယေဘုယျအားဖြင့်တာတာရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းစကားပြော။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ပညာရေးသို့မဟုတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံအတွက်2သို့မဟုတ်3နှစ်ပေါင်းကွာဟမှုထက်ပို။
အလုပ်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သူသာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အချိန်ပြည့်သင်တန်းပြီးစီးပါပြီဖြစ်ရမည်။ နှင့် သူတို့သာအသစ်တစ်ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတော့မှာပါ။
1 ။ အပ်လုဒ်လုပ်နေသည်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း
2 ။ တတ်လွယ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း
3 ။ နောက်ခံသမိုင်းစစ်ဆေး
4 ။ နည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူး
5 ။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အင်တာဗျူး
6 ။ HR အင်တာဗျူး
8 ။ အလုပ်အကိုင်စတင်ခြင်း
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်ဖြစ်ပါသည် နိဂုံးအဘို့။ တွေ့ရှိချက် ကောင်းသောအလုပ်အကိုင် ပင် Tata Consultancy Services နဲ့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ရှောက်သွားလိုအပ်သောစာမေးပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အဆိုပါ HR မန်နေဂျာ။ ရှောက်သွားကြောင်းမလှယျကူဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အသစ်သောကျောင်းသားများအတွက်။ ထိုမှတပါး, လူမျိုး၏အခက်ခဲဆုံးအုပ်စုသည်လောလောလတ်လတ်, ကျောင်းသားများဘွဲ့ရပါပြီ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အလုပ်အကိုင်စတင်များအတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူလမ်းရှိခြင်း။
အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်လူတွေကိုလမ်းညွှန်။ ထိုအခါ Tata Consultancy Services သေချာသည်။ သင်၏အချိန်တန်ဖိုးရှိတိုင်းမိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွောငျ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီများမှ။ မသာပေးခြင်း ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေး။ အကြှနျုပျတို့သညျပျြောရှငျန်ထမ်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။